Tarsiimoo Oromo Baleesu TPLFn Anniyyaa fi Karayuun fixuuf deemuu Oromoo ka’ee bakka jirtuu ilman Tigre biyya bassii
Falmataa Oromoo 26/01/2013
Torban darbe keessa hawaasaa unversity tti walitti bu'insi barattoota oromoo fi tigiree gidduutti umame akka ture dhaga'ameera.ka'umsi walitti bu'insa kanaas barattootni tigire jecha gadhee jedhanii barattoota oromoo abaaran.haata'u male walitti bu'insa kana keessatti barattootni oromoo duratti walii isaanii waan hin beekneef walii isaanii akka rukutan dhaga'ameera.lola umame kana ille hojjettoonni mootummaa hamma tokko haa qabbaneessan male hanga yoonaatti barattootni oromoo irrati ijoolen Tigre irrati duluuf qophii irra akka jiran dhaga'ameera.
Akkuma beekamu barattootni habashaa unversity keessatti barattoota oromoon yeroo baaye jecha jibbisiisaa ittiin jechuun dubbii umu.sababa kanaan barataan oromoo kumaatamaan lakkaawwaman barnoota isaanii irraa ari'aman,ajjeefaman,hidhaman,qaama itti hir'atan. Akka fakkeenyaatti bara 2003 tti barattootni mizan tepi unverstiy tepi campus barattoota 86 irra miidhaan qaamaa guddaa fi xiqqaa irra ga'ed ture. 32 kannen ta'an immoo barnoota irraa ari'amaniiru. Baruma 2005 finfinnee unversity kilo 4 tti barattootni 99 hidhamanii akka turan ni beekama.akkasumas jimmaa,amboo,haramaayaa,adaamaa,madda walaabuu unversity fi k.k.f kessatti yeroo addaa addaa lolli barataa oromoo fi habashaa gidduutti geggeeffamaa akka turee fi tplf'n waraana agaazii jedhamuu fi poolisii federaalaa mooraa unversiity seensisuun barataa oromoorraan miidhaa geessisaa turan.
Nutis miidhaa yeroo addaa barattota oromoo irra ga'u kana ka'umsi isaa eessa akka ta'ee fi maal irraan akka ka'u yeroo addaa addaatti qorannoo adeemsiseen ture, qorannoo koo kanaanis habashoonni akka garaa barataa oromoo baranii fi jecha jibbisiisaa nuun jedhan kan godhe 80 persentii barataama oromoo ta'uu isaa hubadheen jira. Daandii barataan oromoo habashaa keessa nu qabachiises akka armaan gadiittan ibsa 1 karaa shamarree oromoo:
dubartoonni oromoo dargaggeessa habashaa friendii ykn jaalallee godhatu. Kun immoo iccitii oromoo dabarfamee akka habashaaf kennamuu, habashaan akka nu tuffatu godha,yemmuu lolli umamu firaaf alagaa gargar baasuu dadhabnee oromoon oromoo akka miidhu godhe. 2 karaa dargaggoo oromoo; dargaggoon oromoo shamarree habashaa friendii ykn jaalallee godhachuu yeroo hedduu habashaan akka nu arrabsan kan godhe inni guddaan karaa kana. Akka fakkeenyaatti bara 2003 tti lolli mizan teppi university keessatti barataa oromoo fi habashaa gidduutti akka umamu kan godheedha. Innis dargaggoo oromoo tokkotu shamarree tigiree tokkoo jaallatee ture. Isheenir barataan sun barumsa waan danda'uuf jaallatte turte. Irra fayyadamtee booda lamii ishee Tigreti deebite.
Iyaata Baratoota Oromoo University Mekele
uuuuuuuuuu...naniyy...aa natti adirmatu abban biyyaa. miseensa guttan malee barattanii lafagessan tokko hinqabdan jechuun halkan bakka cisichatti waraqafii bareessitu qabatani "dormi" irra nanna'uun baratakeenya danu rifachisun suraa fi qarshii hirka funanuun Finfinnetti ergine waraqa enyumma kan dhabakeenya sinii lanna jechun barata bayyee kayyoo gachisisa jiru.....akkasuma nutii warri kun dhugarra akkafagate itti himuuf ogga yalluu, ilalcha hamaa kessa galudhan balaleefatama jirraa kana kana kan gochajiru Oromo Oromummasani dabarsani gurguraan garba godhate dhabni kun ittin nu adamsa jira. barata waggaa. OPDOn yerroo ijoolee Oromoo universtu hunda keessati reebaman, ajeefaman, hidhaman fi barumsaa irrra argiaman guyya tokko ijoolee Oromoo birra dhabatee hin beekuu, OPDOn Oromoof dhabba miti baratan Oromoo kan jeedhuuf kanaafi, OPDOn uumataa isaa bararuu miti yeeroo Tigroon Oromoo xiqeessan falmachuuf dhiss Hadhamana isaani irrati ilee falmachuu akka hin dandeenye Junedin Sadoo irrati mirkanefanee jira. Baratan Oromoo Miseensa OPDO ta’uu nama kolfa ta’uu ta’uun ala dhaaba siyyasa miti hanga Afoshalee tokko qabma humna hin qabnee jala hiriruun of salphisan uumataa Oromoo salphisudha.
Habasha Amanu fi Habasha Jalachuun ijoolee Oromoo waan nu xiqeeseef Jalatoon Oromoo Oromumaa isaan dhisaa Habashati akka hin michomnee dhamachuu feena. Habasha jalachuu ykn fuudhi jeechuun Oromummaa baleesuu fi Oromoo xiqeesuu dha. Habasha Oromoo harka fi harama muree Oromoo ajeese deebitee hadha mana goodhachuun ykn amoo abba mana goodhachuun lafe Oromoo cacabsuu fi dhigga Oromoon harka dhiqachuudha.
Baha oromiyaa, Ona Anniyyaati wayaaneen somaalee hidhachiiftee ilmaan oromoo garuu qawwee qaban irraa hiiytee ficisiisaa jirti. Hanga guyyaa arratti lakkooysi nama kan dhume nama 93 yeroo tahu heddumminnaan daa'immanniifi Haawwani. Warreen madaaweefii qaamaa irrate lakkooysi hin beekamu. Duuli kun eega eegalee ji'oota sadi dabrullee lollii dhaabbataan kan eegale itti jiru amma torbaan sadihi. Ilmaan oromoo lammii teeysaniif dirmadhaa, iyyaa iyya dabarsaa. Dhaamsa kana yeroo arkatan "share" godhaa facaasaa...... Please share.
Torban Kana Keessa amoo Waar Amhara Galga Gaday fi waari BADN wal gurmessan Oromoo Karayuu irrati duluuf jiruu, Oromoo bakka jirtuu Oromoo wal gurmeesi wal birra dhabadhuu kan jeedhuu iyyati ka’ee jira. Wayyanen Hango ishee dheerefachuu jeecha Lola lamii Oromoo irrati kara hunda bantee jirti. OPDOn amoo dhummaati Oromoo gamachuun fudhachun ala degersa tokko ilee gootee hun beektu. Yonatan Dhibsaa Oromoo irrati dula goodhamee human dafee qaqaba Oromoo qabachuun guyya tokko keessa Oromoo wallega ba’aa lubu isaan hambisee of biyya baqatee seena isaa waan gariin galmeese jira, OPDOn ama garuu Somalee ji’aa 3 gutuu Oromoo qaltuu teesee ilala jirti.
yaa ummata hararge,yaa ummata arsii,yaa Boranaa fi gujii,yaa ummata walloo,yaa ummata jimmaa fi ilu abbaaboor,yaa ummta shawaa,yaa ummta walagaa ...................walumaagalati yaa saba koo OROMOO kana dhageessani akkamiin ustanii...........!!!!!!!!!!!!!!!!!! TPLF ajeeja Junedin Sado fi Dr. Mohamad Alyiti keenun Biyya Ethiopia keessa Oromoo qoofan akka mesha waraana hunda hikachisa, Beneshanguli, Somalee, Amhara fi Afarii uumatoota kiba itti bobasan Oromoo kan ficisisa jira ijoolee Tirayi, Tigroon kana kan hojeetan uumani birof Oromoo yoo wal ta’aan nu ballesuu jeedha kana goocha jiru. Ummatoon kun amoo shira Tigre kana beekan Oromoo irrati boba’uu dhisuu qabu turan garuu hin goonee.
Dulaa Oromoo baha Oromiyya (Anniyyaa) irrati goodhamee fi Oromoo Karayyuu irrati agamamee jiruu tumsuuf Dhabilee Oromoo Mandhen Oromoo ogeesoon Lola Oromoo bakka hundati dirmachuun biyya keessati lamii Oromoo akka gargartan dhamsaa keenya dabarsina. Ogganon TPLF shaira uumani Oromoo ficisisaa jiran kanaafi guyya tokko dhummati lammi Tigray irra waan ga’uuf deemu, kan itti gafataman ta’uu isaa Presidantiin Genocide Watch raga bayee jira. Somalota, Afariin, Amhara, Beneshanguliin hidhachisee Oromoo kan ficisisa jiru TPLF Tigray ta’uu Beekun Oromoo tarkanfi fudhatuu dura Oganoota TPLF irrati egalee diina dhigga Oromoo dhalgalasuu hunda kara irra maqasuu akka qabuu Uumanii Anniyya dhamatee jira.
Universty Oromiyya irraa
Link wal fakata: